डिस्ने प्लसमा के हेर्ने? परम चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू - मनोरञ्जन
डिस्ने प्लसमा के हेर्ने? परम चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू
डिज्नी प्लस एनिमेसन र कार्टुन को दुनिया मा एक पालो लिईन्छ। यसको उच्च रिजोलुसन र गुणस्तर ग्राफिक्सको साथ आकर्षक र फिल्म र टिभी कार्यक्रमहरूको नैतिकता प्लट डिस्ने प्लस मनोरञ्जनको एक अग्रणी प्लेटफर्म बनाएको छ। तर त्यहाँ धेरै टिभि कार्यक्रमहरू र चलचित्रहरू छन् सबै प्रकारका विधाहरूमा उपलब्ध छन् डिज्नी प्लस , तपाईं डिस्ने प्लसमा के हेर्ने भनेर रिस उठ्न सक्छ।
त्यसोभए, यहाँ हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सबै भन्दा राम्रो जवाफको लागि तपाईंलाई राम्रो र मूल्यवानको बारेमा बताउन आएका छौं टिभी कार्यक्रमहरू हेर्दै र डिज्नी प्लसमा चलचित्रहरू।
डिस्ने प्लसमा के हेर्ने?
केही फिल्महरू शीर्ष मूल्या are्कन गरिन्छ कि सबैलाई उनीहरूको बारेमा थाहा छ, र यो एक सानो चलचित्र हेर्नको लागि एक सप्ताहन्त योजना निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। तर यो सबै समयमा हुँदैन। कहिलेकाँही तपाईं धेरै चलचित्रहरू बीचमा अलमल्लमा पर्नुहुन्छ र त्यसपछि अन्ततः सो कार्यक्रम वा चलचित्र हेर्न अन्त हुन्छ जुन हेर्न लायक छैन।
कहिलेकाँही कार्यक्रम राम्रो छ र चलचित्र पनि, तर यसले तपाईंले फिल्महरू र टिभी कार्यक्रमहरूमा साझा गर्ने स्वादको प्रकारसँग मेल खाँदैन। त्यसैले हामी भेला भएका छौंaसबै भन्दा राम्रो चलचित्र को सूची र डिज्नी प्लसमा हेर्न टिभी कार्यक्रमहरू।
डिस्ने प्लसमा हेर्न १ 13 उत्तम चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस्:
सिम्प्सन डिज्नी प्लसमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको टिभी कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो। योसँग बुद्धि, साहसिक र कमेडीका अविश्वसनीय थिमहरू छन्।
यो सब भन्दा शीर्ष मूल्या rated्कन गरिएको टिभी कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो, त्यसैले यदि तपाईं डिज्नीको दुनियामा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यो अवलोकन गर्नको लागि तपाईंको सूचिमा यो पहिलो हुनुपर्दछ।
डिस्ने प्लस विद्यार्थी छूटको लागि साइन अप गर्नुहोस्
२ अभालारको एलेना
एलेना सब भन्दा धेरै रेटेड आधुनिक डिज्नी राजकुमारी हो। उनीसँग एउटा राज्य छ कि उनी दया र शान्तिको साथ शासन गर्न चाहान्छिन्, तर कठिनाईको साथ उनले सामना गर्नु सम्भव नहुन सक्छ।
एलेना एक बहुमुखी चरित्र हो। उनी एक योद्धा, एक नेता, र एक राम्रो डिजाइन गरिएको वार्डरोबको साथ एक फैशनेबल राजकुमारी हो। Avalor को एलेना हेर्दा सधैं हेर्न लायक छ।
यो डिज्नी प्लसमा सब भन्दा लायक कार्यहरू श्रृंखला हेर्ने हो। नायक धेरै प्रख्यात एक्शन नायकहरू जस्तै फलामको मानिससँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ।
कार्यक्रमको दुई सत्रहरू थिए, र ती दुबै हेर्न धेरै उत्साहित छन्।
Tim. टिमन र पम्बा
टिमन र पम्बाका पात्रहरू धेरै आकर्षक छन्। ज्गल भएर यात्रा गर्दा उनीहरूलाई केहि समस्याहरू भए।
तर सम्पूर्ण श्रृंखला तपाईं एक सनसनीखेज र रोमाञ्चक अनुभव को साथ सेवा गर्दछ।
Smart. स्मार्ट केटा
यो एक दस बर्ष उमेरको बच्चाको कहानीको बारेमा हो जुन अतिरिक्त-सामान्य स्मार्ट छ। ऊ समस्या र चिढचिढक्क वयस्कहरूको संसारको माध्यमबाट आफ्नो महान बुद्धिले व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गर्दछ।
त्यसैले, एक स्मार्ट केटा हेर्न धेरै प्रेरणादायी मनोरन्जन हुन सक्छ।
Gra. गुरुत्व फल्स
दुई जुम्ल्याहा मुख्य लिड हो। उनीहरूले ओरेगनको एउटा शहरमा छुट्टीको योजना बनाउने योजना गरे जुन गुरुत्वाकर्षण झरना भनेर चिनिन्छ। तिनीहरूले त्यहाँ आश्चर्यजनक र अनौंठो र अजीब घटनाहरू अनुभव गर्छन्।
The. क्यारिबियनको समुद्री डाँडा
क्यारिबियन का समुद्री डाँडाका धेरै भाग हुन्छन्। तिनीहरूसँग रोमाञ्चक हुन्छन् किनकि उनीहरूसँग एक थ्रिल, कार्य, सस्पेंस र थोरै रोमान्स छ।
यो एक सबैभन्दा लोकप्रिय चलचित्र हो जुन तपाईं डिस्ने प्लसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कथा समुद्री डाकुहरूको समुह वा समुहका वरिपरि घुम्छ जुन पूरा गर्न विभिन्न मिसनहरूमा छन्।
T. खेलौना कहानी
खेलौना कहानी एक रमाईलो र लोकप्रिय चलचित्र हो। यसका धेरै भागहरू छन्, र ती सबैमा हड्तालको संघर्षको समाधानको साथ एक शानदार कथानक छ।
यो पहिलो १ released 1995 in मा रिलीज भएको थियो, र अब यो २०१ 2019 मा टोय स्टोरी as को रूपमा चौथो भागको साथ आएको छ।
Little। द लिटिल मरमेड
सानो जलपरी सुन्दर समुद्री मरमेडको कथा हो। कथा एक सौन्दर्यको साथ गएको छ जुन उनले समुद्रमा बोक्सीको साथ बनाउँछिन् एक मानव राजकुमारलाई भेट्नको लागि जब उनी उनीसंग प्रेममा परिन्।
यो डिस्ने प्रेमीहरु, विशेष गरी केटीहरु बीच चल्ती छ।
१०. पपिनहरू विवाह गर्नुहोस्
विवाह पप पिन डिज्नी प्लसको सबैभन्दा रमाईलो र मनपराउने पात्रहरू मध्ये एक हो। कथा एक जना मानिसको बारेमा हो जुन श्री बै Ban्कका नामले चिनिन्छन्, आफ्ना दुई बच्चाहरूको लागि आया खोजी गर्दै। त्यसोभए, उसले दयालु महिला मैरी पपपिनलाई भेट्छ, र उसले फिल्ममा सबैको वरिपरि प्रेम र खुशीको नयाँ टोन सेट गर्छ।
यो हेर्न मात्र लायक छ किनकि योसँग एक धेरै उत्कृष्ट कथानक छ, तर यो पनि किनभने एक व्यक्तिले पपिंन्सको असाधारण चरित्रबाट सिक्न सक्छ।
११. एभेन्जर अन्त खेल
लगभग सबैलाई एभेन्जरहरूको बारेमा थाहा छ, र यसको अन्तिम भाग हो एभेन्जर्स एन्ड खेल विश्वव्यापी रूपमा हेरिएको छ र २०१ 2019 को शीर्ष रिलीजको रूपमा मूल्या been्कन गरिएको छ।
बदला लिनेहरूको अन्त्य खेल बिचारको चारै तिर घुम्दछ कि सबै बदला लिनेहरूले मानवता बचाउन पुनर्मिलन गर्नुपर्छ।
१२. कसले रोजर खरायो खसाल्यो
तुन रोजरको चरित्र छ। उनलाई आफ्नी श्रीमतीको बारेमा श doubts्का छ कि उसले अर्को पात्र मार्विनसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ। त्यसोभए, उसले निर्णय गर्छ कि उसले यस विषयको लागि एउटा जासुसीलाई आफ्नी पत्नी र मार्विनमा भाडामा लिनु पर्छ।
तर मार्भिन मरेको भेटियो र ऊ उसको हत्याको आरोप लाग्यो।
१.. संगीतको ध्वनी
यो भोन ट्र्याप परिवार गायकहरूको वास्तविक जीवनमा आधारित एक धेरै तापक्रम कथा हो। यो व्यापक रूपमा हेरिएको छ, र आलोचकहरूले यस उत्कृष्ट रिलीजमा धेरै सकारात्मक समीक्षा गरेका थिए।
डिज्नी प्लस मनोरन्जनको हृदयस्पर्शी स्रोतको महत्वपूर्ण र व्यापक स्रोतहरू मध्ये एक हो। योसँग धेरै विधाहरू छन् जुनमा अद्वितीय र उल्लेखनीय रोमाञ्चक टिभी कार्यक्रम र चलचित्रहरू छन्।
कहिलेकाँही डिस्ने प्लसमा के हेर्ने भनेर आफैंलाई सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। माथीको सूची राम्रो खोजको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान पछि संकलित गरिएको छ जुन तपाईं डिज्नी प्लसमा हेर्न सक्नुहुनेछ सहज र रमाईलो अनुभव लिन।
Hulu मा के हेर्ने? परम संग्रह
राम्रो वेबसाइटहरू मा जानुहोस्
नि: शुल्क अनलाइन खेल वेबसाइट सूची
Chrome क्रोमकास्टमा कास्ट हुँदैन
सिंहासनको मौसम 1 एपिसोड १ putlocker9
xbox प्रत्यक्ष कोड जनरेटर २०१ 2016